Humnootiin Sudaan Kibbaa waliigalteewwan kanaan duraa akka kabajan gaafatame – Fana Broadcasting Corporate
Humnootiin Sudaan Kibbaa waliigalteewwan kanaan duraa akka kabajan gaafatame
Finfinnee, Hagayya 15,2011 (FBC) – Waliigalteewwan kanaan duraa akka kabajaman ministirri Ministeera Dhimma Alaa FDRI obbo Gadduu Aandaargaachaw humnootii Sudaan Kibbaatif waamicha dhiyeessan.
Obbo Gadduun humnootiin Sudaan Kibbaa waliigalteewwan kanaan duraa kabajuun hojiirra akka oolchan gaafataniiru.
Waltajjiin baniinsa marii raawwii waliigalteewwan cee’umsaan duraa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera.
Yeroon cee’umsaan duraa baatii Faranjootaa Caamsaa 2019 Finfinneetti irratti waliigalame, amma baatii Faranjootaa Sadaasa 2019tti baatii 6f dheereffamuun isaa ni yaadatama.
Ega waliigaltichaatii ummannii fi morkattoonni biyyaa godaanan biyyatti deebi’uun akka gaaritti ilaallameera.
Ajjeechaa fi dhukaasni hir’achuun hariiroo fi walamantaa paartilee cimseera jedhameera.
Yaata’uutii humna nageenyaa waloo hundeessuu, leenjii fi bobbii humna namaa raawwachuu, lakkoofsa mootummoota naannoo murteessuu fi kanneen biroo yeroo kaa’ameen raawwatamaa akka hin jiraatin gamaaggamameera.
Waltajjii har’aarratti humnootiin Sudaan Kibbaa, biyyoonni miseensa Mootummoota Misoomaa Baha Afrikaa, fooramiin Mootummoota Misoomaa Baha Afrikaa, Ameerikaa, Briitaaniyaa fi Noorweey, Chaayinaa, Gamtaan Awrooppaa, Gamtaan Afrikaa, Dhaabbanni Mootummoota Gamtoomanii fi qooda fudhattoonni biroo hirmaataniiru.